Liiska Xisbiyada Siyaasadda Soomaaliya - Wikipedia
Halkan waxaa ku jira dhamaan liiska xisbiyada siyaasada wadanka Soomaaliya.
2.1 Xisbiyada Qaranka
2.2 Xisbiyada Maamulgoboleedka
Xisbiga Midowga Dhalinyarada Soomaaliyeed (loo soo gaabiyo: SYL) wakhtiyadii hore loo yaqaaay Kooxda Dhalinyarada Soomaaliyeed (Somali Youth Club) (SYC), waxay ahaayeen xisbi siyaasadeed ka shaqayn jirey wadanka Soomaaliya. Xisbigani wuxuu ku bilaabmey urur dhalinyaro ah, markii dambe isku bedelay xisbigii dhaqdhaqaaqa ugu horeeyey ee Madaxbanaanida wadanka Soomaaliya sanadihii u dhexeeyay 1950kii ilaa 1960kii.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa aasaasaha iyo gudoomiyaha Xisbiga Nabadda iyo Horumarka.
Raiisalwasaarihii hore Maxamed Cabdulaahi Maxamed, waa gudoomiyaha Xisbiga Tayo.
Wadanka Soomaaliya waxaa maanta ka jira tiro badan oo xisbiyo siyaasadeeda ah, kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
↑ . 14 November 2012 http://www.garoweonline.com/artman2/publish/Somalia_27/Somalia_Puntland_President_announces_political_association.shtml. Soo qaatay 19 November 2012. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Liiska_Xisbiyada_Siyaasadda_Soomaaliya&oldid=209517"
Last edited on 16 Febraayo 2021, at 08:50
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Febraayo 2021, marka ee eheed 08:50.